छोरी मानेकी सपनाको नाँ गो फोटो आफ्नो मोवाइलमा किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ !’ भन्दै दिए चे’तावनी (भिडियो सहित हेर्नुस्) – Khabar Patrika Np
छोरी मानेकी सपनाको नाँ गो फोटो आफ्नो मोवाइलमा किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ !’ भन्दै दिए चे’तावनी (भिडियो सहित हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २७, २०७७ समय: १३:०६:०३
काठमाडौ । वेवारिसे शव ब्यवस्थापनका का’रण नाम कमाएका विनयजग बस्नेतले आफैले छोरी मानेकी १७ वर्षकी किशोरी सपना रोका मगरको नां गो तस्बिर आफुसंग मोवाइलमा छ भन्दै खुले आम युट्युवमा स्वी’कार गरेका छन् । उनले सपनालाई आफुले नै अहिले सम्मको अवस्थामा ल्याएको भन्दै अरुले नै सपनालाई उक्साएर आफु वि’रुद्ध बोल्न लगाएको आ’रोप लगाएका छन् ।
उनले सिमित युट्युवरहरुले सपनालाई घेरा’बन्दी गरेर आफु वि’रुद्ध सपनालाई बो’ल्न उक्साएको आ’रोप लगाएका छन् ।अरुको उक्साहटमा लागेर सपना आफ्ना वि’रुद्ध लागे सबैलाई ठेगान लगाउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । उनले सपनाको अ श्लि ल तस्बिर आफ्नो मोवाइलमा र पेन ड्राइभमा पनि सुरक्षित राखेको स्वीकार गरेका छन् ।
आफुले छोरी मानेकी सपनाका त्यस्ता नराम्रा तस्बिर उनले सुरक्षित राख्नुको का’रण भने उनले बताएनन् । म र्ता क्या नहि कर्ता ? उनले चे’तावनी दिँदै भनेका छन् यदि मलाई कसैले धावा बोल्छ भने सबैलाई सि ध्या इ दिन्छु ।
सामाजिक काम गर्न अ’वरोध गर्ने कसैलाई पनि म छोड्दिन । चाहे त्यो सपना रोका मगर नै किन नहोस् मैले छो’ड्दीन उनले भने ।
उनले आफ्ना परिवारले समेत विश्वास नगरेको बेलामा आफुले ल्याएर बीबीसीको शक्तिशाली महिला हुने अवस्था सम्म पुर्याएको दा’वी गरेका छन् । उनले आफ्नै का’रणले नै सपना त्यो अवस्थामा पुगेको उनको दा’वी छ ।ंभिडियो हेर्नुस।